Mogadishu Journal » Hoggaanka sare ee Midowga Yurub oo markii ugu horeysay haweeney loo dhiibay
Mjournal :-Codeyn qarsoodi ah oo ay sameeyeen guddiga Midowga Yurub ayaa madaxweynaha gudigaasi ugu doortay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi qabata,taasi oo ah Ursula von der Leyen oo u dhalatay dalka Jarmalka.
Ursula von der Leyen ayaa u mahadcelisay baarlamankii doortayiyadoo ku tilmaantay kalsoonida ay xubnahaasi siiyeen ay ka tarjumayso midnimada Midowga Yurub qeybaha Bariga Koonfurta Galbeedka iyo Waqooyiga Yurub.
Sidoo kale waxaa la filaya in bisha soo socota ee November la bedelo guddoomiyaha guddigaasi ee haatan talada haya Jean-Claude Juncker ,kaasi oo la hadal hayo in uu dbedelo Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Jarmalka.
Madaxweynaah cusub ee Midowga Yurub ee la doortay Mrs von der Leyen waxay ku dhalatay magaalada Brussels ee caasimadda Dalka Belgium, waxayna leedahay 7 caruur a,waxay ahayd haweeney dhaqtarad ah ka hor inta aysan ku soo biirin siyaasaddda, waxay balanqaaday in ay xooga saari doonto sidii loo heli lahaa daryeel bulsho guud.
Hay’adaha amniga Federaalka oo la wareegtay ammaanka magaalada Dhuusa-mareeb
Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay tayanta adeegyada ay helayaan Xujeyda Soomaaliyeed sanadkan